Air France ayaa tijaabisay IATA Travel Pass duulimaadyadii Montreal-Paris |
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka Kanada » Air France waxay tijaabisaa IATA Travel Pass duulimaadyada Montreal-Paris
Air France waxay tijaabisaa IATA Travel Pass duulimaadyada Montreal-Paris
Barnaamijka tijaabada ah wuxuu si adag diiradda u saari doonaa duulimaadyada duulimaadyada duulimaadyada ee ka baxa Montréal-Trudeau ilaa Paris-Charles de Gaulle, laga bilaabo Juun 24 illaa iyo Luulyo 15, 2021.
Air France waxay noqoneysaa diyaaradii ugu horeysay ee soo bandhigta barnaamij tijaabo ah duulimaadyada dibada uga baxa garoonka diyaaradaha Montréal-Trudeau.
Ujeeddada barnaamijka waa in lagu tijaabiyo barnaamijka moobilka IATA Travel Pass ee Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka.
Tijaabadani waa mid bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha waxaana lagu bixiyaa si ikhtiyaari ah.
Ku darista Montreal-Paris duulimaadyadeeda tijaabinta barnaamijka IATA Travel Pass, Air France waxay noqoneysaa diyaaradii ugu horeysay ee soo bandhigta barnaamij tijaabo ah duulimaadyada dibada ka baxa ee Gegada diyaaradaha ee Montréal-Trudeau digitative negative natiijooyinka baaritaanka COVID-19. Waxay si wada jir ah u fulineysaa barnaamijka kooxda Biron Health Group.
Barnaamijka tijaabada ah wuxuu si adag diiradda u saari doonaa duulimaadyada duulimaadyada ee Air France ee ka baxa Montréal-Trudeau ilaa Paris-Charles de Gaulle, laga bilaabo Juun 24 illaa Julaay 15, 2021. Ujeeddadeedu waa in la tijaabiyo Codsiga moobiilka IATA Travel Pass Pass ee Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka oo awood u siin doona socotada
Iska hubi shuruudaha gelitaanka ugu dambeeyay ee COVID-19 ee la xiriira waddankooda u socdo
Hayso natiijooyinka tijaabadooda COVID-19 ee lagu sameeyo shaybaarada lamaanaha oo toos loogu diro barnaamijka
Si aamin ah ugu keydi dukumiintiyadaan barnaamijka si ay ugu muujiyaan shirkadaha diyaaradaha iyo maamulada inay buuxiyeen shuruudaha gelitaanka ee khuseeya, iyagoon baahinin macluumaad dheeri ah oo ku saabsan caafimaadkooda shaqsiyeed.
Tijaabadani waa mid bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha waxaana lagu bixiyaa si ikhtiyaari ah. Waxay u furan tahay macaamiisha ku safraya duulimaadyada ay maamusho Air France iyadoo Paris ay tahay halka ugu dambeysa ee ay tagayaan.
Tijaabinta waxaa lagu sameyn doonaa tas-hiilaadka kooxda Biron Health Group ee garoonka diyaaradaha ee Montréal-Trudeau. Rakaabka uqalma ayaa heli doona ogeysiis dhowr maalmood kahor intaysan u ambabixin Paris. Tijaabadu waa u suurta gal maalinta ay baxayaan dadka safarka ah ee jira 11 sano iyo wixii ka dambeeya ee aan la talaalin ama aan helin kaliya qiyaas kooda koowaad, maadaama looga baahan yahay inay soo bandhigaan cadeynta natiijada PCR ama natiijada baaritaanka antigen ee la soo saaray 72 saacadood gudahood markay baxayaan. soo gal faransiiska.
Talaabooyinkee ayuu raacayaa socotada?
Qofka socotada ah wuxuu soo dejiyaa barnaamijka IATA Travel Pass oo laga heli karo Apple Store iyo Google Play waana lagu dhaqaajiyaa iyadoo la adeegsanayo lambarka ay soo gudbiso Air France.
Wuxuu ballan ka qabsadaa PCR ama baaritaanka antigen ee bogga Biron Health Group. Waqtiga baaritaanka, wuxuu weydiisanayaa in natiijada si toos ah loogu daro IATA Travel Pass
Madaarka, socdaalku wuxuu kusocdaa miiska Air France SkyPriority. Markuu hubinayo nidaamka socdaalka, wuxuu soo bandhigayaa taleefankiisa halkii laga heli lahaa natiijo daabacan